Game | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Harvest Swap Apk Mod Unlimited Money
Download FarmVille: Harvest Swap Apk Mod Unlimited Money, New Update With Version 1.0.1001
Something Puzzling has come to the Farm!
A NEW puzzle game withaTwist brought to you by the makers of the world’s most popular Farming game.
Your favorite FarmVille characters are back with exciting new stories... And you’re the hero! Use your puzzle solving skills in charming scenarios and challenges found while living onafarm. Each chapter will provideanew farming challenge that you will conquer over the course of several levels. Save the barn from blazing down or lure some adorable bunnies out of their hidey-holes, and unlock more adventures. Exciting story-based challenges andaunique combination of swap and drag moves take this classic match-3 game to the next level.
MATCH crops using multiple exciting moves
EARN points as you match bountiful farm fresh produce
HARVEST matching crops to complete levels and unlock new challenges
JOIN your friends and your favorite FarmVille characters
CREATE strategic plays as you progress through each chapter
Barn’saBlazing – Save your barn from the fire by matching water droplets
Bunny Bonanza – Adorable bunnies have invaded your crops; feed them carrots to keep them full
Hungry Farm – You’ve run out of feed and the animals are getting antsy
Cold Snap – Brrr! Don’t let that cold frost get your crops
Chasing Chickens – Your chickens have run amok and only you can get them back in the coop
Game: FarmVille: Harvest Swap APK
Original link - http://www.apklover.net/2015/04/farmville-harvest-swap-apk-mod.html
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, August 13, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ Android, Game
အရုပ်တွေ ဆက်ရမယ့် ဥာဏ်စမ်း Game - Jigsaw Puzzles Epic APK v1.1.4 Modded All Unlocked
ဖုန်ပေါ်မှာ အရုပ်တွေ ဆက်ရတဲ့ Game တစ်ခု တင်ပေး လိုက် ပါတယ်။ တော်တော်လေးကို စိတ်ဝင်စား ဖို့ ကောင်းတဲ့ Game တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှာ မြင်တွေ့ ရတဲ့ အတိုင်းပဲ အကောင် ပုံလေးတွေ သဘာဝ ရှုခင်း ပုံလေးတွေ ဖြစ်အောင် ပုံ အပိုင်း အစလေး တွေကို တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကို ဆက်ပေး ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကစားရမယ့် ပုံစံကိုတော့ သဘောပေါက် ကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ Hack ထားပြီးသား ဖြစ်တဲ့ အတွက် မိမိ ဆက်ချင်တဲ့ ပုံတွေကိုကို ကျော်ပြီး ရွေးချယ် နိုင်ပါတယ်။ Lock ချထားတဲ့ ပုံတွေ ကိုလည်း Lock ဖြုတ်ထား တဲ့ အတွက် အဆင့်တွေ အများကြီး ကစားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Game ပုံစံလေးကို နမူနာ ကြည့်နိုင်ဖို့ အတွက် အောက်မှာ Screen Shot တွေ ပြထား ပါတယ်။
Android OS 2.3 နှင့် အထက် ဖုန်းများမှာ ကစားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Candy Crush Saga Apk + Mega Mod + Mod (Unlimited all) v1.52.2.0 + Patcher
Candy Crush ဆိုတာ ကတော့ လူကြိုက် အများဆုံး Game တစ်ခုလို့ ပြောရင် မမှားပါဘူး။ လူကြီး လူငယ် မရွေး ကစားနေ ကြတာ ကိုလည်း တွေ့ရ ပါတယ်။
Play Store မှာတော့ Free ပေး ထားတာပါ... ဒါပေမဲ့ သူက Hack ထားတာ မဟုတ် တာကြောင့် အချိန် အကန့် အသတ်နဲ့ ပဲ ကစားနိုင် တာပါ။ အခု ကျနော် တင်ပေးလိုက် တာကတော့ Hack ပြီးသား ဖြစ်လို့ စိတ်ကြိုက် ကစားနိုင် ပါတယ်။
Life တွေ ကလည်း Unlimited ဖြစ်ထားပြီး သားနော်။ Unlimited Everything ပေါ့ဗျာ။ အဆင့်တွေ ကလည်း Unlimited ပဲနော် နောက်ဆုံး အဆင့်ထိ Hack ထားတာပါ။ ကြိုက်တဲ့ အဆင့်တွေကို ကျော်ပြီး ကစားနိုင် ပါတယ်။
Android OS 2.3 နှင့် အထက် ဖုန်း များမှာ ကစားနိုင် မှာဖြစ် ပါတယ်။
Candy Crush ကစားတဲ့​ ဘော်​ဒါ​တွေ အတွက် အချက်​ 400 Move လို့ရတဲ့ Candy Crush Extra Life
ကျ​နော်​ ဒီတစ်​ခါ Candy Crush ကစား​တဲ့ ​ဘော်​ဒါ​တွေ အတွက်​ အချက်​ 400 ​ရွှေ့လို့ ရတဲ့ Candy Crush Extra Life New Version ​လေး ထွက်​လို့ တင်​​ပေး လိုက်​ပါတယ်​ ။ ဒီ Apk လေးကို အသုံးပြု့မယ်​ ဆိုရင်​ ဖုန်းမှာ Root ရှိ ရပါမယ်​ ။
အသုံးပြု့ပုံ က​တော့ မခက်​ခဲ ပါဘူး ။ Apk ကို Install တင်​ Run ပြီး Root Access ​တောင်းရင်​ ​ပေးလိုက်​ပါ ။
Add life ဆိုတာကို Click ပြီး အသက်​ခိုးနိုင်​ပါပြီ ။
Run out of lives on Candy Crush Saga?
Then this is the app for you.What you get
★ - the secret behind getting extra lives.
★- A simple user interface to implement the Secret.
★ - Access to our social networks
★ - Loads of info about game cheats.
★ - Info on how to skip levels (root).
★ - Info on how to add boosters (root).
Please visit our website below before emailing us questions. The support team will not respond to questions that can be answered on the
.- Have to wait # hours for new life, why?
- "Cannot gain root access", why?- What is root?
- How do i root my device?Allcan be answered @ the website below.
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, April 21, 2015 No comments:
နာမည်ကြီး အက်ရှင်ဂိမ်း-Modern Combat 5: Blackout v1.2.0o Apk [Offline]
နာမည်ကြီး အက်ရှင်ဂိမ်း-Modern Combat 5: Blackout v1.2.0o Apk [Offline] ဂိမ်း ဗားရှင်း အသစ်လေးပါ ကြမ်းကြမ်း ရမ်းရမ်း အက်ရှင် ကောင်းကောင်း aဆာ့ကစားချင်တဲ့ ဘော်ဒါတွေ အတွက် ဆော့လို့ ကောင်းတဲ့ ဂိမ်းလေးပါ
Modern Combat 5: Blackout v1.2.0o Apk [Offline] | 935 MB | Resumable Links | Requires : Android 4.0 and up |
APK ကို အောက်မှာ ဒေါင်းယူပါ။
▼ Download APK ▼
OBB ကို အောက်မှာ ဒေါင်းယူပါ။
▼ Part - 1 ▼ and ▼ Part -2▼ and ▼ Part -3▼
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, March 28, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ Android, Game, Phone Application
ခရီးလမ်း ခပ်ကြမ်းကြမ်း မောင်းနှင်ရမယ့် Colin McRae Rally v1.02 (Apk + Obb)
ကျွန်တော် အခုတင်ပေး လိုက်တဲ့ Game လေး ကိုတော့ တစ်ခါမှ မတင်ပေး ဖူးသေး ပါဘူး။
ကားမောင်း ပြိုင်တဲ့ Game လေး တစ်ခုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် တင်ပေး နေကြ ကားမောင်း ပြိုင်တဲ့
Game တွေလို မဟုတ်ဘူးနော်။ မောင်း ရမှာက လမ်းကြမ်း ခရီးကြမ်းမှာ ပြိုင်မောင်း ရမှာ
တော်တော်လေးကို လန်းပါ တယ်ဗျာ။ တောလမ်း ၊ တောင်တက်လမ်း ၊ မြေကြမ်းတဲ့ လမ်း
တွေ အစရှိတဲ့ လမ်းကြမ်းကြမ်း တွေမှာ ကားမမှောက်အောင် ထိန်း ပြီး မောင်းနှင် ရမှာဖြစ်
ရုပ်ထွက် ကလည်း HD ဖြစ်တာကြောင့် အတော်လေးကို အရသာ ရှိရှိနဲ့ ကစား ရမယ့် Game
ကောင်းလေး တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
နမူနာအနေနဲ့ အောက်မှာ Screen Shot တွေကို ကြည့်လိုက် ပါဦး။
Andorid OS 2.3 နှင့် အထက် ဖုန်းများမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Apk + Obb ကို တစ်ခု
ချင်း ခွဲပြီး တင်ပေး ထားပါတယ်။ Install လုပ်နည်း ကလည်း အရင် Game တွေ လိုပဲ။
1 ပထမဆုံး Apk ကို Install လုပ်ပေးပါ။
2 ပြီးရင် ဒေါင်းလို့ ရလာတဲ့ ‘com.codemasters.cmrally’ ဆိုတဲ့ Fonlder လေးကို Copy ကူးပြီး
sdcard/Android/obb ထဲကို Paste လုပ် လိုက်ပါ။
3 ဒါဆို ကစားလို့ ရသွား ပါပြီ။
▼ Download APK ▼ OR ▼ Download OBB ▼
Clash of Clan v7.1.1 for Android (24.2.2015 update)
Clash of Clan ဆော့သူများ အတွက် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့မှာ ထပ်မံ ထွက်ရှိ လာတဲ့
Clash of Clan ရဲ့ update version 7.1.1 ကုို တင်ပေးလုိုက် ပါတယ်။
ယခု version မှာတော့ ပါဝင်လာတဲ့ features တွေကတော့
အပေါ်မှာ ဖော်ပြ ထားတဲ့ feature များဟာ Clash of Clan update version အသစ် 7.1.1 ကုို သွင်း
ထားမှသာ ရရှိနုိုင်မှာ ဖြစ်လုို့ Clash of Clan v7.1.1 ကုို မိမိတုို့ရဲ့ Android ဖုန်းများမှာ install ပြု
လုပ်လုိုတယ် ဆုိုရင်တော့ အောက်က link မှာ ရယူနုိုင် ပါတယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, February 26, 2015 1 comment:
1942 Pacific Front Mod APK Money and Unlocked
စစ်တိုက် ဂိမ်းကောင်းလေး 1942 Pacific Front Mod APK Money and Unlocked ဗားရှင်း အသစ်
ထွက်ဂိမ်းလေးပါ၊1942 ပစိဖိတ် စစ်ပွဲ ပုံစံ ရန်သူတွေကို နိုင်အောင် တိုက်ခိုက်ပြီး နယ်မြေ သိမ်းပိုက်
အနိုင်ယူ ဆော့ကစား ရမဲ့ ဂိမ်းကောင်းလေးပါ
1942 Pacific Front Apk Mod Unlimited Money and Unlocked,New Update With Version 1.0.0
Game: 1942 Pacific Front APK
From : www.patheinit.com
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, February 12, 2015 No comments:
Dead Earth: Sci-fi FPS Shooter (2015) Full (Android Game)
ဒီကောင်လေး ကတော့ မိမိ ဖုန်းမှာ အက်ရှင် Shooter လေးတွေ ကိုမှ ကြိုက်တတ် သူများ
အတွက် တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
မြို့တွင်းမှာ သောင်းကျန်းနေသော စက်ရုပ် များကို လိုက်လံ နှိမ်နှင်းသော Shooter ဂိမ်းပါပဲ။
အခန်းတွဲတွေ အများကြီးပါဝင်ပြီး Android 2.3+ နှင့် အထက်မှာ ကစားနိုင်ပါတယ်။
အောက်မှာ ပုံတွေနဲ့ ပြထားပါတယ်။ ဒေါင်းလော့ ဆွဲလို့ရ တဲ့ ဖိုင်ထဲ ကနေ Obb ဖိုင်ကို SD /
Android/Obb ဖိုင်ထဲမှာ ထည့် ပြီး Apk ကို အင်စတောလုပ်ပြီး ကစားနိုင် ပါတယ်။
Candy Crush ဆိုတာ ကတော့ လူကြိုက် အများဆုံး Game တစ်ခုလို့ ပြောရင် မမှားပါဘူး။ လူကြီး
လူငယ် မရွေး ကစားနေ ကြတာ ကို လည်းတွေ့ ရပါတယ်။ Play Store မှာတော့ Free ပေးထား
ဒါပေမဲ့ သူက Hack ထားတာ မဟုတ်တာကြောင့် အချိန်အကန့် အသတ်နဲ့ ပဲ ကစားနိုင် တာပါ။
အခုကျနော် တင်ပေး လိုက်တာကတော့ Hack ပြီးသားဖြစ်လို့ အကြိုက် ကစားနိုင်ပါတယ်။
Life တွေ ကလည်း Unlimited ဖြစ် ထားပြီးသားနော်။ Unlimited Everything ပေါ့ဗျာ။ အဆင့်
တွေကလည်း Unlimited ပဲနော် နောက်ဆုံး အဆင့်ထိ Hack ထားတာပါ။
ကြိုက်တဲ့ အဆင့်တွေကို ကျော်ပြီးကစား နိုင်ပါတယ်။
Android OS 2.2 နှင့် အထက် ဖုန်းများမှာ ကစားနိုင် မှာဖြစ်ပါတယ်။